ဝန်ထမ်းတွေကို လစာအပြင် အတိုးမဲ့၂လစာချေးငွေနဲ့ Bonusရော ထောက်ပံ့ရိက္ခာပါပေးတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် – အောငျနိုငျသူ
Aung Naing Thu | November 2, 2020 | News | No Comments
ဝန်ထမ်းတွေကို လစာအပြင် အတိုးမဲ့၂လစာ ချေးငွေနဲ့ Bonus ရော ထောက်ပံ့ရိက္ခာပါပေးတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်
ဒီအချိန်မှာတော့ အိမ်မှာ ​နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတချို့ကလွဲရင် ကိုယ့်ဝန်ထမ်း​တွေကို အလုပ်မဆင်းခိုင်း​ပေမယ့်လည်း ထောက်ပံ့ရိက္ခာနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ လစာ​​​ပေးထား​ခဲ့တာပါ။ဒါ​ပေမယ့် လည်း တချို့ဝန်ထမ်း​လေး​တွေရဲ့ တခြားမိသားစုဝင်​တွေ
အရင်လို အလုပ်အကိုင်​တွေ အဆင်မ​ပြေ​ကြ​တော့တာ ကြားမိပါတယ် ။တချို့ဝန်ထမ်း​တွေရဲ့ မိသားစုဝင်​တွေမှာ Taxi ဆွဲတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တချို့က ​ဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။
တချို့က စာသင်တာ။တချို့က ​ကျောင်းကားဆွဲတယ် စသဖြင့်​ပေါ့ဗျာ။ဒါ​ပေမယ့် လည်း ဒီကာလမှာက တချို့အလုပ်အကိုင်​တွေက ဝင်​ငွေနည်းသွားတယ် ။တချို့က ဝင်​ငွေ လုံးဝ မရှိ​တော့ဘူး။
လစာအရမ်း​​ကောင်းကြတဲ့ ဝန်ထမ်း​တွေမဟုတ်ရင်တော့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ က​လေးငယ်​တွေကလွဲပြီး တော့ မိသားစုဝင်အကုန်လုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်မှ အဆင်​ပြေမယ့် ကာလဖြစ်တဲ့ အတွက် အခုချိန် ​တော်​တော်များများအဆင်မ​ပြေဘူး။
Lady Grace Diamond Land က ရတဲ့လစာနဲ့ ​​​ထောက်ပံ့ရိက္ခာ​ကြောင့်ဘဲ စားစရိတ် မပူရ​ပေမယ့် အိမ်ငှား​နေတဲ့သူ​တွေအတွက် အိမ်ငှားခ ပူရနိုင်ပါတယ်။က​လေးအငယ်​လေး ရှိသူ​တွေအတွက်တော့ နို့မှုန့်ဖိုး၊
သက်ကြီးရွယ်အို အမိအဖရှိသူ​တွေအတွက် ​ဆေးဖိုး ၊ စတဲ့ တခြား ကုန်ကျစရိတ်​တွေအတွက် ​ငွေလိုနိုင်တယ်လို့ ​တွေးမိတယ်။ဒါ​ကြောင့်ဘဲ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးစီကို သူတို့ရသင့်တဲ့ လစာနဲ့ ​ထောက်ပံ့ရိက္ခာအပြင်ကို ၂ လစာချေး​ငွေကိုပါ ထုတ်​ချေးခဲ့တယ် ။
လုံးဝ အတိုးမဲ့ပါ ။ လုပ်ငန်း​တွေ ပုံမှန် ပြန်လည်ပါတ်တဲ့အချိန်​ရောက်မှဘဲ လစဉ် ခွဲပြီး ဆပ်ရုံပါ။ ဒီလို လုပ်​ပေးဖို့ကလည်း အများကြီး စဉ်းစားရတာပါ။အထူးသဖြင့် ဒီလို ကာလမှာပါဗျာ။ ဝန်ထမ်း​တွေအ​နေနဲ့ ​ချေး​ငွေက တစ်​ယောက်ကို ၂ လစာပဲ
ရတာဆို​ပေမယ့်လည်း ဝန်ထမ်းအားလုံးကို ​ပေးရတဲ့ ဆိုင်အ​နေနဲ့က သိန်းရာနဲ့ချီတယ်​လေဗျာ။ဒါ​တောင် Video ထဲမှာနယ်ပြန်သွားတဲ့ ဝန်ထမ်း​တွေနဲ့ ပန်းတိမ်ဆရာ​တွေ မပါ​သေးဘူး။အရင်ကတော့ဘ Online ​ရောင်းအားအပြင် ဆိုင် ၂ ဆိုင်စာ ​ရောင်းအားရှိ​နေ​တော့ ဝင်​ငွေပို​ကောင်းတယ်။
ဒါ​ပေမယ့် အခုကတော့ Online ​ရောင်းအားပဲ ရှိတာ​ကြောင့် ဝင်​ငွေက အရင်နဲ့စာရင်၃ ပုံ ၁ ပုံပဲ ရှိတာပါ။ဒါ​ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ထက် ပိုခက်ခဲနိုင်မယ့် ဝန်ထမ်းမိသားစု​တွေကို စဉ်းစားမိပြီး ဒီအစီအစဉ်​လေး လုပ်​ပေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒီလိုအကြပ်အတည်းကာလမှာ မထင်ထားခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းက​လေး​တွေစီက မမတို့နဲ့အတူ အခက်အခဲကာလကို အတူတူဖြတ်​ကျော်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်​​လေး​တွေ ​တွေ့ရလို့ ​ကျေနပ်မိတာ​တော့ အမှန်ပါဘဲ။တချို့ဝန်ထမ်း​လေး​တွေကရော လစာ​ရော Bonus ​ရော ရတဲ့တွက် ​ငွေမလို​သေးလို့ ​ချေး​ငွေ မယူ​တော့ ပါဘူး.
အစ်ကိုနဲ့မမတို့ ကုန်ကျတာ​တွေ အရမ်းများတာ သိလို့ပါ ဆိုတဲ့သူ​တွေ​တောင် ရှိပါတယ်။ဘာပဲ ​ဖြစ်ဖြစ် သူတို့​လေး​တွေ ​ပျော်​နေတာ​တွေ့​တော့ ​ကျေနပ်ရပါတယ်။
တစ်ချို့ဝန်ထမ်း​လေး​တွေဆို ရတဲ့​ငွေ​ စုစု​ပေါင်းက သိန်းဆယ်ဂဏာန်းအထက် ငှက်တစ်​သောင်းနားနိုင်တဲ့ သစ်ပင်​ကောင်းတစ်ပင် မဖြစ်နိုင်​သေး​ပေမယ့်လည်းကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်က လူ​တွေကို လုံခြုံတဲ့ အရိပ်အာဝါသ​ပေးနိုင်တဲ့ သစ်ပင်​လေးတစ်ပင် ဖြစ်ခွင့်ရတာကို ​ကျေနပ်မိတာပါ။အားလုံးလည်း ဒီကာလကြီးကို အဆင်​ပြေ​ပြေနဲ့ ဖြတ်​ကျော်နိုင်ကြပါ​စေ​နော်။
Unicode…လစာ အပွငျ အတိုးမဲ့၂လစာ ခြေးငှနေဲ့ Bonus ရော ထောကျပံ့ရိက်ခာပါပေးတဲ့ လုပျငနျးရှငျ
ဒီအခြိနျမှာတော့ အိမျမှာ နတေဲ့ ဝနျထမျးတခြို့ကလှဲရငျ ကိုယျ့ဝနျထမျးတှကေို အလုပျမဆငျးခိုငျးပမေယျ့လညျး ထေောကျပံ့ရိက်ခာနဲ့ ထိုကျသငျ့တဲ့ လစာပေးထားခဲ့တာပါ။ဒါပမေယျ့ လညျး တခြို့ဝနျထမျးလေးတှရေဲ့ တခွားမိသားစုဝငျတှေ
အရငျလို အလုပျအကိုငျတှေ အဆငျမပွကွေတော့တာ ကွားမိပါတယျ ။တခြို့ဝနျထမျးတှရေဲ့ မိသားစုဝငျတှမှော Taxi ဆှဲတဲ့သူတှရှေိပါတယျ။ တခြို့က ဈေးဆိုငျဖှငျ့ထားတယျ။
တခြို့က စာသငျတာ။တခြို့က ကြောငျးကားဆှဲတယျ စသဖွငျ့ပေါ့ဗြာ။ဒါပမေယျ့ လညျး ဒီကာလမှာက တခြို့အလုပျအကိုငျတှကေ ဝငျငှနေညျးသှားတယျ ။တခြို့က ဝငျငှေ လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။
လစာအရမျးကောငျးကွတဲ့ ဝနျထမျးတှမေဟုတျရငျတော့ အိမျတဈအိမျမှာ ကလေးငယျတှကေလှဲပွီး တော့ မိသားစုဝငျအကုနျလုံးနီးပါး အလုပျလုပျမှ အဆငျပွမေယျ့ ကာလဖွဈတဲ့ အတှကျ အခုခြိနျ တျောတျောမြားမြားအဆငျမပွဘေူး။
Lady Grace Diamond Land က ရတဲ့လစာနဲ့ ထောကျပံ့ရိက်ခာကွောငျ့ဘဲ စားစရိတျ မပူရပမေယျ့ အိမျငှားနတေဲ့သူတှအေတှကျ အိမျငှားခ ပူရနိုငျပါတယျ။ကလေးအငယျလေး ရှိသူတှအေတှကျတော့ နို့မှုနျ့ဖိုး၊
သကျကွီးရှယျအို အမိအဖရှိသူတှအေတှကျ ဆေးဖိုး ၊ စတဲ့ တခွား ကုနျကစြရိတျတှအေတှကျ ငှလေိုနိုငျတယျလို့ တှေးမိတယျ။ဒါကွောငျ့ဘဲ ဝနျထမျးတဈဦးစီကို သူတို့ရသငျ့တဲ့ လစာနဲ့ ထောကျပံ့ရိက်ခာအပွငျကို ၂ လစာခြေးငှကေိုပါ ထုတျခြေးခဲ့တယျ ။
လုံးဝ အတိုးမဲ့ပါ ။ လုပျငနျးတှေ ပုံမှနျ ပွနျလညျပါတျတဲ့အခြိနျရောကျမှဘဲ လစဉျ ခှဲပွီး ဆပျရုံပါ။ ဒီလို လုပျပေးဖို့ကလညျး အမြားကွီး စဉျးစားရတာပါ။အထူးသဖွငျ့ ဒီလို ကာလမှာပါဗြာ။ ဝနျထမျးတှအေနနေဲ့ ခြေးငှကေ တဈယောကျကို ၂ လစာပဲ
ရတာဆိုပမေယျ့လညျး ဝနျထမျးအားလုံးကို ပေးရတဲ့ ဆိုငျအနနေဲ့က သိနျးရာနဲ့ခြီတယျလဗြော။ဒါတောငျ Video ထဲမှာနယျပွနျသှားတဲ့ ဝနျထမျးတှနေဲ့ ပနျးတိမျဆရာတှေ မပါသေးဘူး။အရငျကတော့ဘ Online ရောငျးအားအပွငျ ဆိုငျ ၂ ဆိုငျစာ ရောငျးအားရှိနတေော့ ဝငျငှပေိုကောငျးတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုကတော့ Online ရောငျးအားပဲ ရှိတာကွောငျ့ ဝငျငှကေ အရငျနဲ့စာရငျ၃ ပုံ ၁ ပုံပဲ ရှိတာပါ။ဒါပမေယျ့လညျး ကိုယျ့ထကျ ပိုခကျခဲနိုငျမယျ့ ဝနျထမျးမိသားစုတှကေို စဉျးစားမိပွီး ဒီအစီအစဉျလေး လုပျပေးဖွဈခဲ့တာပါ။
ဒီလိုအကွပျအတညျးကာလမှာ မထငျထားခဲ့တဲ့ ဝနျထမျးကလေးတှစေီက မမတို့နဲ့အတူ အခကျအခဲကာလကို အတူတူဖွတျကြျောမယျဆိုတဲ့ စိတျလေးတှေ တှရေ့လို့ ကနြေပျမိတာတော့ အမှနျပါဘဲ။တခြို့ဝနျထမျးလေးတှကေရော လစာရော Bonus ရော ရတဲ့တှကျ ငှမေလိုသေးလို့ ခြေးငှေ မယူတော့ ပါဘူး.
အဈကိုနဲ့မမတို့ ကုနျကတြာတှေ အရမျးမြားတာ သိလို့ပါ ဆိုတဲ့သူတှတေောငျ ရှိပါတယျ။ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ သူတို့လေးတှေ ပြျောနတောတှတေ့ော့ ကနြေပျရပါတယျ။
တဈခြို့ဝနျထမျးလေးတှဆေို ရတဲ့ငှေ စုစုပေါငျးက သိနျးဆယျဂဏာနျးအထကျ ငှကျတဈသောငျးနားနိုငျတဲ့ သဈပငျကောငျးတဈပငျ မဖွဈနိုငျသေးပမေယျ့လညျးကိုယျ့ပါတျဝနျးကငျြက လူတှကေို လုံခွုံတဲ့ အရိပျအာဝါသပေးနိုငျတဲ့ သဈပငျလေးတဈပငျ ဖွဈခှငျ့ရတာကို ကနြေပျမိတာပါ။အားလုံးလညျး ဒီကာလကွီးကို အဆငျပွပွေနေဲ့ ဖွတျကြျောနိုငျကွပါစနေျော။